लुट्न सके लुट, अरु देशमा पाइदैन नेपालमै हो छुट ! - लुट्न सके लुट, अरु देशमा पाइदैन नेपालमै हो छुट !
लुट्न सके लुट, अरु देशमा पाइदैन नेपालमै हो छुट !
२०७५, ३ फाल्गुन, 03:02:16 PM
काठमाडौं । नेपाली लोक दोहोरी क्षेत्रका लोकप्रिय एवं चर्चित कलाकार पशुपति शर्माले लुट्न सके लुट कान्छा, अरु देशमा पाइदैन नेपालमै हो छुट, बोलको गज्जबको व्यंग्यात्मक गित लिएर आएका छन् । सायद यो गित भन्दा अरु कुनै बिकल्प छैन होला ? सभ्य रुपमा नेताहरुलाई झकझक्याउने । व्यंग्यत्मक रुपमा लोक दोहोरीको मार्फत शर्माले नेताहरुलाई कुरी कुरी लगाईदिएका छन् ।
लुट्न सम्म लुट भन्ने शब्दमा तयार भएको उक्त गीत मार्फत धेरै विकृति र बिसंगतिलाई देखाईएको छ । देशमा चलिरहेको घुसिया प्रवृति, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा र बलात्कार जस्ता बिषयलाई पशुपति शर्माले गीतमा समेटेका छन ।
यसो त पशुपति शर्माका प्राय गीत जनचेतना मुलक र ब्यांग्यात्मक हुने गर्दछन् । उनले यो गीत मार्फत पनि सरकारलाई गतिलो झटारो हानेका छन्। गीतमा शब्द अनी संगीत पनि गायक शर्माको आफ्नै रहेको छ । गीतको म्युजिक भिडियोमा पशुपती शर्मा, मञ्जु बि.क र प्रज्वल भण्डारी देखीएका छन्।